၂ ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ တွန်မီနေးကို ဖာနန်ဒက်စ်က ဘယ်လိုအမည်ပြောင်ပေးခဲ့သလဲ…? – Premier League Special
၂ ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ တွန်မီနေးကို ဖာနန်ဒက်စ်က ဘယ်လိုအမည်ပြောင်ပေးခဲ့သလဲ…?
မန်ယူအသင်း ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်က လိဒ်ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲမှာ ၂ ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ ကစားဖော် တွန်မီနေးကို စကော့တီနယ်ဒင်ဟို(Scottynaldinho) ဆိုပြီး နည်မည်ပြောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တွန်မီနေးဟာ ပွဲအစ ၃ မိနစ်အတွင်းမှာဘဲ ၂ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့လို ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းမှာ ၃ မိနစ်အတွင်း၂ ဂိုးသွင်းတဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားအဖြစ် သမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာပါ။ ဒီပွဲမှာ ဖာနန်ဒက်စ် တစ်ဂိုးဖန်တီး ပေးခဲ့သလို ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ဂိုးသွင်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
စကော့တလန်သားဖြစ်တဲ့ တွန်မီနေးဟာ အဲဒီသွင်းဂိုးတွေတင်မကဘဲ တစ်ပွဲလုံးအတွက်လည်း ခြေစွမ်းပြပြီး ခံစစ်ကိုကောင်းစွာ ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် မန်ယူက တန်ပြန်တိုက်စစ်တွေရရှိခဲ့ရာမှာလည်း သူရဲ့ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေက အများကြီးထိရောက်ခဲ့လို့ ပွဲ စဉ်အလိုက် အကောင်းဆုံးဆုကိုလည်း ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တွန်မီနေးဟာ အကောင်းဆုံးဆု နဲ့အတူ ကစားနေတဲ့ပုံ ၄ ပုံကို အင်စတာဂရမ်ပေါ်တင်ခဲ့ပြီး”ကြီမားလှတဲ့နိုင်ပွဲ” လို့ စာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒီပို့စ်အတွက် မှတ်ချက်ပေးတဲ့သူတွေအမျာကြီးရှိနေခဲ့သလို ဖာနန်ဒက်စ်ကလည်း နာမည်ပြောင်ကို သေချာစွာရွေးချယ်ပြီး မှတ်ချက်ပြုသွားတာပါ။
သူက ” ဘောလုံးဆိုတာ ထူးဆန်းသဗျ။ သိပ်ကောင်းပါတယ် စကော့တီရိုနယ်ဒင်ဟိုရေ” လို့ ရေးသားခဲ့တာပါ။ ဒီနာမည်ပြောင်ဟာ တွန်မီနေးရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ စကော့တွန်မီနေးနဲ့ ဘရာဇီးလက်ရွေးစင်ဟောင်း ရော်နယ်ဒင်ဟို ရဲ့အမည်ကိုပေါင်းစပ်ပြီး အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တွန်မီနေးက အဲဒီမှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်ရာမှာ ” ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော် … မနက်ဖြန် ဒီစကားလုံတွေအတွက် ပြောကြတာပေါ့ 🙄😂” လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
တွန်မီနေးရဲ့ခြေစွမ်းကို အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဂွိုင်းယားနဲ့ ဝက်စ်ဟမ်းကွင်းလယ်လူ ဒီကလန်ရိုက်စ် တို့ကလည်း ချီးကျူးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ တွန်မီနေးကတော့ နိုင်ပွဲအတွက်ကျေနပ်ရသလို ကစားဖော်တွေအားလုံးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်မှုနဲ့အတူ ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ပွဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားပါတယ်။
၂ ဂိုးသြင္းယူခဲ့တဲ့ တြန္မီေနးကို ဖာနန္ဒက္စ္က ဘယ္လိုအမည္ေျပာင္ေပးခဲ့သလဲ…?
မန္ယူအသင္း ကြင္းလယ္ဖန္တီးရွင္ ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္က လိဒ္ယူႏိုက္တက္နဲ႔ပြဲမွာ ၂ ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ ကစားေဖာ္ တြန္မီေနးကို စေကာ့တီနယ္ဒင္ဟို(Scottynaldinho) ဆိုၿပီး နည္မည္ေျပာင္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တြန္မီေနးဟာ ပြဲအစ ၃ မိနစ္အတြင္းမွာဘဲ ၂ ဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့လို ပရီးမီးယားလိဂ္သမိုင္းမွာ ၃ မိနစ္အတြင္း၂ ဂိုးသြင္းတဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားအျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္းဝင္ခဲ့တာပါ။ ဒီပြဲမွာ ဖာနန္ဒက္စ္ တစ္ဂိုးဖန္တီး ေပးခဲ့သလို ကိုယ္တိုင္လည္းတစ္ဂိုးသြင္းခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
စေကာ့တလန္သားျဖစ္တဲ့ တြန္မီေနးဟာ အဲဒီသြင္းဂိုးေတြတင္မကဘဲ တစ္ပြဲလုံးအတြက္လည္း ေျခစြမ္းျပၿပီး ခံစစ္ကိုေကာင္းစြာ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ မန္ယူက တန္ျပန္တိုက္စစ္ေတြရရွိခဲ့ရာမွာလည္း သူရဲ႕ေဘာလုံးေပးပို႔မႈေတြက အမ်ားႀကီးထိေရာက္ခဲ့လို႔ ပြဲ စဥ္အလိုက္ အေကာင္းဆုံးဆုကိုလည္း ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
တြန္မီေနးဟာ အေကာင္းဆုံးဆု နဲ႔အတူ ကစားေနတဲ့ပုံ ၄ ပုံကို အင္စတာဂရမ္ေပၚတင္ခဲ့ၿပီး”ႀကီမားလွတဲ့ႏိုင္ပြဲ” လို႔ စာေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ဒီပို႔စ္အတြက္ မွတ္ခ်က္ေပးတဲ့သူေတြအမ်ာႀကီးရွိေနခဲ့သလို ဖာနန္ဒက္စ္ကလည္း နာမည္ေျပာင္ကို ေသခ်ာစြာေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး မွတ္ခ်က္ျပဳသြားတာပါ။ သူက ” ေဘာလုံးဆိုတာ ထူးဆန္းသဗ်။ သိပ္ေကာင္းပါတယ္ စေကာ့တီ႐ိုနယ္ဒင္ဟိုေရ” လို႔ ေရးသားခဲ့တာပါ။ ဒီနာမည္ေျပာင္ဟာ တြန္မီေနးရဲ႕နာမည္ျဖစ္တဲ့ စေကာ့တြန္မီေနးနဲ႔ ဘရာဇီးလက္ေ႐ြးစင္ေဟာင္း ေရာ္နယ္ဒင္ဟို ရဲ႕အမည္ကိုေပါင္းစပ္ၿပီး အမည္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။
တြန္မီေနးက အဲဒီမွတ္ခ်က္ကိုတုံ႔ျပန္ရာမွာ ” ခင္ဗ်ားနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ … မနက္ျဖန္ ဒီစကားလံုေတြအတြက္ ေျပာၾကတာေပါ့ 🙄😂” လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။
တြန္မီေနးရဲ႕ေျခစြမ္းကို အသင္းေခါင္းေဆာင္ မက္ဂြိဳင္းယားနဲ႔ ဝက္စ္ဟမ္းကြင္းလယ္လူ ဒီကလန္႐ိုက္စ္ တို႔ကလည္း ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ တြန္မီေနးကေတာ့ ႏိုင္ပြဲအတြက္ေက်နပ္ရသလို ကစားေဖာ္ေတြအားလုံးရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္မႈနဲ႔အတူ ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
ဆာလာ မပျော်တော့လို့ လီဗာပူးကလည်း ရောင်းချဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆို
ပွဲထွက်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေရလို့ ဗီလာရီးရဲလ်နဲ့အငှားစာချုပ်ကို စောစီးစွာအဆုံးသတ်ဖို့ ဂျပန်မက်ဆီ ပြင်ဆင်